Soo-saareyaasha iyo alaab-qeybiyeyaasha Shiinaha ee Gargaarka Degdegga ah - Baili Medical
Guriga > Alaabta > Qalabka Gargaarka Degdegga ah > Qalabka Gargaarka Degdegga ah
Agabka Gargaarka Degdegga ah Si guud ahaan, dhammaan qalabka badbaadin kara nolosha waqti gaaban waa qalabka gargaarka degdegga ah. Caadi ahaan waxaan nidhaahnaa qalabka gargaarka degdegga ah waxaa iska leh dareenka cidhiidhiga ah, inta badan waa qalabka caafimaadka caadiga ah ee lagama maarmaanka u ah samatabbixinta bukaannada isbitaalka. Waxaa ka mid ah defibrillators, neefsiyeyaasha fudud, kombaresarada wadnaha, hagaajinta jabka cadaadiska xun, iyo dhululubada ogsijiinta. Sariirta samatabbixinta oo kala duwan, qalabka nuugista cadaadiska taban, mashiinka caloosha si toos ah, bamka duritaanka yar-yar, bamka faleebada tirada iyo qalabka kale ee xaaladaha degdegga ah ee tubbada xiirta iyo tracheotomy. Nidaamka la socodka, qalabka oksijiinta xuubabka ka baxsan jidhka (ECMO), sifaynta peritoneal-ka iyo nidaamka sifaynta dhiigga iyo qalabka kale.
Agabka Gargaarka Degdegga ah waa cilmi dhamaystiran oo ka kooban qaybo badan. Waa in wax laga qabto oo la barto noocyo kala duwan oo dhaawacyo ba'an ah iyo dhaawac ba'an oo weyn oo cusub, taas oo ah, waqti gaaban gudaheed, si loo hanjabo badbaadada dhaawaca shilalka nolosha bini'aadamka iyo cudurrada, sayniska ee tallaabooyinka samatabbixinta degdegga ah ayaa la qaaday. Ma la tacaalayso dhammaan habka dhaawaca iyo dhaawaca, laakiin waxay diiradda saartaa daaweynta dhaawaca iyo marxaladda gargaarka degdegga ah, waxa ku jira inta badan: dib-u-kicinta wadnaha, sambabada, maskaxda, shaqada wareegga dhiigga ee uu keeno garaamyada jidhka, dhaawac ba'an, multi- -shaqsi la'aanta xubnaha, sumowga degdega ah iyo wixii la mid ah. Daawooyinka degdega ah waxay sidoo kale u baahan yihiin inay daraasad ku sameeyaan oo ay naqshadeeyaan samatabbixinta goobta, gaadiidka, isgaarsiinta iyo qaybaha kale ee dhibaatada, markaa daawada degdega ah waxaa ka mid ah: daaweynta isbitaalka ka hor (xarunta degdega ah), qolka gargaarka degdega ah ee isbitaalka, qaybta daryeelka khatarta ah (ICU) saddex qaybood . Sidaa darteed, Agabka Gargaarka Degdegga ah waa qayb muhiim ah oo ka mid ah daawada degdegga ah.
Tourniquet la tuuri karo
Tourniquet la tuuri karo ayaa laga sameeyay caag dabiici ah oo polymer ah ama caag gaar ah, nooca fidsan oo dheer, miisaan xoog leh. Ku habboon xarumaha caafimaadka ee daaweynta joogtada ah iyo daaweynta faleebo, dhiig, shubid dhiig, isticmaalka hemostasis ee la tuuri karo; Ama dhiigbax addin ah, cayayaan abeesada duurjoogta ah ayaa qaniinya dhiigbax degdeg ah.
1. Qalabka lafdhabarta, oo sidoo kale loo yaqaano saxanka hagaajinta laf-dhabarka iyo fidiyaha saxanka, wuxuu ka samaysan yahay walxaha PE, xoog leh oo waara, waxaana lagu nuugi karaa raajada;
2. Lagu rakibay bareelo saxan ah 3 suun gaar ah oo leh midabyo kala duwan, cabbirka waxaa lagu hagaajin karaa suunka is-dhejinta, laga bilaabo carruurta ilaa dadka waaweyn, ballaca suunka suunka waa 5cm;
3, cabbirka: 184×46×5cm
4, xambaarsan: 159Kg
5, miisaanka: 7.5kg
Tababare AED Toos u ah Defibrillator Waxbaridda Tababarka Gargaarka Koowaad ee Dugsiga CPR Qalabka Waxbaridda Laba-luqadlaha ah
AED Tababaraha AED Automated Defibrillator-ka Dibadda Tababarka Gargaarka Degdegga ah ee Dugsiga CPR Qalabka Waxbaridda Laba-luqadlaha ah waa qalab is-difaaca jirka oo toos ah, qalab defibrillator ah oo si gaar ah loogu isticmaalo meelaha caamka ah iyo guryaha loogu talagalay xirfadlayaasha aan gargaarka koowaad ahayn. Marka la isticmaalo, koollada koollada ee defibrillator dusha tooska ah ayaa lagu dhejiyaa aagga hore ee wadnaha ee bidix iyo xagasha hoose ee scapula dhabarka bidix siday u kala horreeyaan, iyo hawlgalka defibrillation waxaa loo fuliyaa iyadoo loo eegayo tamarta defibrillation ee calaamadeysan. Haddii qiyaasta wax ku oolka ah ee tamarta defibrillation ee loo isticmaalo aan la garanayn, awoodda ugu badan ee qalabka waxaa loo isticmaali karaa hawlgalka defibrillation koronto.......
Dib u soo noolaynta nuugista, oo sidoo kale loo yaqaano bacda hawada sahayda oksijiinta ee la cadaadiyo (AMBU), waa qalab fudud oo hawo macmal ah. Marka loo eego neefsashada afka-ka-afka ah, xoogga-saarista ogsijiinta waa mid sarreeya, qalliinkuna waa sahlan yahay. Gaar ahaan marka xaaladdu ay halis tahay oo aysan jirin wakhti loogu talagalay intubation endotracheal, maaskarada la cadaadiyo ayaa loo isticmaali karaa si toos ah ogsajiinta, si uu bukaanku u helo oksijiin ku filan oo uu wanaajiyo xaaladda hypoxia unugyada.
Qalabka Daryeelka iyo Gargaarka Degdegga ah
Marka loo eego baahiyaha xaaladaha degdegga ah ee kala duwan, Qalabka Daryeelka iyo Gargaarka Degdegga ah wuxuu ka samaysan yahay isku-dhaf macquul ah oo isugu jira qalab caafimaad oo kala duwan oo leh shaqada gargaarka degdegga ah iyo agabka maalinlaha ah, waxaana lagu qalabeeyay dawada gargaarka degdegga ah ee si sharci ah loo ansixiyay oo ay soo saartay shirkadda Yunnan Baiyao Group Co. , Ltd. Waxay ka kooban tahay qalab caafimaad iyo alaabooyin maalinle ah oo caawiya oo leh hawlaha dib-u-kicinta wadnaha sambabada, nadiifinta iyo jeermiska, dhiig-baxa, faashad iyo hagaajinta jabka.
Soo-celinta Wadnaha Sambabada Aed Defibrillation Supply
Dib-u-soo-nooleynta Wadnaha sambabada Aed Defibrillation Supply waa laxanka laxanka badan ee caadiga ah si fududna loo daweyn karo taaso ah sababta koowaad ee wadne istaaga dadka waaweyn. Barashada caafimaadka | Shabakadda waxbarashada ee bukaannada VF, haddii uu miyir beeli karo 3 ilaa 5 daqiiqo si degdeg ah CPR iyo defibrillation, heerka badbaadada ayaa ah kan ugu sarreeya. Defibrillation-ka degdega ah waa daaweyn wanaagsan oo muddo gaaban ah VF bukaannada wadnuhu istaagay ee ka baxay isbitaalka ama bukaanada kuwaas oo ilaalinaya xamaasadooda.